Ndepụta okwu maka ihe nkiri: ebe ibudata ha yana otu esi ekiri ha | Nzukọ mkpanaka
Ụlọ Ignatius | | Internet, Nkuzi
Agbanyeghị na Spain anyị nwere ike ịnweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị vidiyo vidiyo niile dị ugbu a n'ahịaN'oge ụfọdụ, onyinye nke ikpo okwu a anaghị egbo mkpa anyị, a na -amanye anyị ime ụzọ anyị niile maara.
Nsogbu anyị na -eche ihu bụ na ọ bụrụ na ihe nkiri ahụ abụghị n'asụsụ Spanish, anyị ga -eji ndepụta okwu, ndepụta okwu na ọ gwụla ma etinye ha na fim ahụ (iji usoro Mk), a na -amanye anyị ịchọ ịntanetị, ọbụlagodi na ọ dị n'asụsụ Bekee ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịhụ ha n'asụsụ Spanish. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ebe ibudata ndepụta okwu maka ihe nkiri, M na-agba gị ka ị na-agụ.
Na ịntanetị anyị nwere ọtụtụ ibe weebụ nke na -enye anyị ohere budata ndepụta okwu maka ihe nkiri na usoro, peeji nke na -akwado ibe ha, ebe ọ bụ na ọ bụghị ndepụta okwu niile dị na nyiwe niile.
Ndepụta okwu nwere ndọtị .srt, ndọtị na -enye ohere ịmegharị vidiyo ga -amata ha na akpaghị aka. Ọ bụ eziokwu na enwere ụdị faịlụ ndị ọzọ, nke a na -ejikarị bụ .srt, yabụ na anyị agaghị ekwu maka ụzọ ọzọ dị, ebe ọ bụ na n'ikpeazụ, nsonaazụ ya bụ otu.
1 Otu esi ekiri ndepụta okwu ebudatara na fim
2 Ngwa igwu vidiyo nwere ndepụta okwu
2.1 VLC (sistemụ arụmọrụ niile)
3 Weebụsaịtị ibudata ndepụta okwu na Spanish na Bekee
3.2 Ndepụta Okwu.tv
3.4 Ntinye ego
Otu esi ekiri ndepụta okwu ebudatara na fim
Ozugbo anyị ebudatara ndepụta okwu, oge eruola ka anyị na fim ahụ kpọọ ya ka o wee jiri olu na -agakọta aka. Ọ bụrụ na ịchọghị ime ka ndụ gị sie ike ma jiri ngwa ọ bụla ịchọrọ iji ndepụta okwu kpọọ fim ma ọ bụ usoro, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ nyegharịa faịlụ sobtaitel n'otu aha dị ka ihe nkiri ma chekwaa ha ọnụ.
N'ụzọ dị otu a, mgbe ị na -egwu vidiyo, ngwa ga -etinye ndepụta okwu, na -enweghị anyị ga -eme ihe ọ bụla n'akụkụ anyị, faịlụ nwere ndepụta okwu. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị na -eji otu aha faịlụ maka ndepụta okwu dị ka vidiyo, isi ihe bụ na aha ha abụọ bụ otu.
para nyegharịa faịlụ na Windows, anyị ga -etinyerịrị òké n'elu faịlụ ahụ, pịa F2 wee dee aha ahụ. Na macOS, anyị ga -etinyerịrị òké n'elu faịlụ ahụ wee pịa igodo Tinye.
Ngwa igwu vidiyo nwere ndepụta okwu
VLC (sistemụ arụmọrụ niile)
VLC bụ ihe ọkpụkpọ vidiyo na ọdịyo kacha mma dị n'ahịa ugbu a na -akwado codec na vidiyo ọ bụla site n'eziokwu. Na mgbakwunye, ngwa ahụ bụ ihe mepere emepe ma dị maka nbudata kpamkpam maka sistemụ arụmọrụ niile site na Windows ruo macOS, site na Linux, iOS, Android, Ubuntu, Solaris ...
Ngwa a ịgbakwunye faịlụ sobtaitel na -akpaghị aka nke ihe nkiri ma ọ bụrụhaala na ọ nwere otu aha dị ka faịlụ vidiyo. Ọ bụrụ na ị gbanwebeghị ya ma ọ bụ chọọ ịnwale ndepụta okwu dị iche iche, ị nwere ike ime ya site na isoro usoro ndị m na -egosi n'okpuru:
Ozugbo anyị ji VLC mepee vidiyo vidiyo, anyị na -aga menu nke elu nke faịlụ, pịa Subtítulos - Tinye faịlụ ndepụta okwu wee họrọ folda ebe ha nọ.
Na akpaghị aka, ngwa ga -amalite igosi ndepụta okwu n'ọnọdụ ebe vidiyo dị.
Weebụsaịtị ibudata ndepụta okwu na Spanish na Bekee
Weebụ Yoursubtitle.com bụ otu n'ime ihe zuru oke na ịntanetị yana ebe ị ga -ahụ ndepụta okwu nke usoro ọ bụla, n'agbanyeghị na amachaghị ya, na -asọpụrụ ebumnuche ya "Gbasaa omenala."
Ọ gụnyere ngalaba "Na nhazi" ebe egosiri ya ọkwa ntụgharị asụsụ ọhụrụ, nke na -eme ka ọ dị mfe ịmara n'otu ntabi anya ma ọ bụrụ na ndepụta okwu ikpeazụ nke usoro ọkacha mmasị anyị adịlarị ma ọ bụ ogologo oge ọ ga -adị.
Weebụ ndepụta okwu .tv na -enye anyị ndepụta okwu nke usoro kacha ọhụrụ, usoro nke anaghị adị mgbe ụfọdụ na mba ndị ọzọ na -abụghị United States, ma n'asụsụ Spanish na Latin yana Bekee, dị mma maka ịkwado na ime ka ihe ọmụma anyị nke asụsụ Shakespearean zuo oke.
Ọ bụrụ na ịchọghị ndepụta okwu, ịnwere ike iji bọtịnụ Ndepụta usoro nke dị n'elu ibe weebụ, nke na -egosi anyị ndepụta site na mkpụrụedemede anyị nwere ike iji nweta ndepụta okwu nke usoro dị.
subdivx.com were ihe karịrị 10 nọ n'ọrụ ọ ghọwokwa akwụkwọ ntụnyere na ụwa ndepụta okwu maka ihe nkiri na usoro n'asụsụ Spanish na Latin. Ọ dịghị mkpa ịdebanye aha n'oge ọ bụla iji budata ndepụta okwu, ihe a ga -enwe ekele na -enweghị obi abụọ, agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhapụ okwu, jikọọ aka na obodo ...
Ntinye ego na -enye anyị ọtụtụ ntụgharị asụsụ, ọkachasị nke usoro Asụsụ Spanish na Latin America, yabụ ọ bụrụ na ị na -achọ ndepụta okwu n'asụsụ ndị ọzọ, nke a abụghị weebụsaịtị ị na -achọ.
Ọ naghị enye anyị usoro nyocha usoro, yabụ anyị ga -eji nhọrọ Chọgharịa n'usoro, ka anyị chọta ndepụta okwu nke usoro anyị na -achọ.
Ọ bụrụ na ị bụghị naanị na -achọ ndepụta okwu na Bekee ma ọ bụ Spanish, mana ị na -achọ n'asụsụ ndị ọzọ, weebụ ebe ị ga -ahụ ha bụ Mmeghe, webụsaịtị na -enye anyị ohere iji asụsụ chọọ maka ma fim ma usoro.
Ọ dịghị mkpa ịdebanye aha iji budata ndepụta okwu, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrịọ arịrịọ ma ọ bụ jikọọ aka na ọrụ a ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. A na -echekwa ibe a, dị ka ndị niile na -enye gị ohere ibudata ndepụta okwu, ekele maka mgbasa ozi yabụ ọ bụrụ na ijiri ihe mgbasa ozi, ọ gaghị afụ ụfụ imebi ya maka ibe a.
Addic7ed.com bụ webụsaịtị ndepụta okwu kacha ibu n'ụwa. Usoro ọ bụla, ihe nkiri ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ nwere ndepụta okwu ya n'ọtụtụ asụsụ site na webụsaịtị a. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịchọta ndepụta okwu maka gallero, Basque na Catalan, n'agbanyeghị na ọ pere mpe na nke aha ndị ama ama.
N'elu ibe weebụ ọ na -enye anyị ohere tọọ asụsụ ka ịchọọ ndepụta okwu, nke ga -ezere inwe ịgagharị na nsonaazụ ọchụchọ nke ibe weebụ weghachitere ikpe ekpere ịhụ ma ọ dị n'asụsụ anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Ndepụta okwu maka ihe nkiri: ebe ibudata ha yana otu esi ekiri ha
Ihe nkiri HBO iri kacha mma nke isiokwu niile